Kubvumbi 01, 2022
Mashoko Anotaura Pamire Hurumende yeAmerica Pakudyidzana neNATO
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dziri mugungano reNATO.
Mutungamiri wenyika yeAmerica VaJoe Biden pavakashanya kuEurope svondo rapera vakati mutungamiri weRussia VaVladimir Putin vakanyagira yaona apo vakafunga kuti vakapamba Ukraine zvaizoba kuti mugungano iri muite zinyekenyeke.
VaBiden vanoti NATO haina kubvira yabatana sezvayakaita parizvino. Mutungamiri wenyika yeAmerica akashanya kumuzinda weNATO kuBrussels kunoita musangano nevatungamiri venyika dziri mugungano iri kuzeya ,kurwiswa kweUkraine neRussia.
Mumashoko avakaburitsa vakabatana mushure memusangano uyu, vatungamiri ava vakashora zvikuru zvakaitwa neRussia zvekurwisa Ukraine uye kukonzera kusagadzikana munyika dzepasi rino. Vatungamiri ava vakaudza Kremlin kuti iite nhaurirano nekuchimbidza yekupedza hondo iyi.
NATO yakasimbaradza kuti ichamira neUkraine ichiti inyika yakazvimirira yoga inofanira kuremekedzwa. Vatungamiri ava vakati vachaita mushandira pamwe wekubatsira Ukraine vakavimbisa kuti vachamira nechibvumirano cheNATO cheArticle 5 of the Washington Treaty chekuita chirwirangwe kana imwe nyika iri mugungano iri ikarwiswa.
Vakati kutumirwa kwemauto anodarika zviuru makumi mana kunyika dzemuNATO dziri kumabudazuva dzinoti Bulgaria, Hungary, Romania, neSlovakia munongedzo wekugadzirira kwakasimba kweNATO VaBiden vanoti VaPutin varikusangana nezvavange vasingafungire pakutanga kurwisa kwavakaita Ukraine.
Kubatana uku kwakabudawo pamusangano wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 uye pane mumwe musangano neEuropean Council.
G 7 yakatenderana kutemera Russia zvirango zvakaomarara. Pachibvumirano chadzakaita, nyika idzi dzakati dzakazvipira kubatsira Ukraine nenyika dzakaipoteredza nezvekudya nezvimwe zvakakosha.
Mushure mekyita musangano nevatungamiri venyika dziri muEU, VaBiden nemutungamiri wegungano iri VaUrsula von der Leyden vakati vachayedza napose pavanogona kuona kuti havachavimbe zvakanaka nekutenga mafuta ekufambisa dzimotokari kuRussia.
Pavakashanyira vapoteri vari kutiza hondo kuUkraine kuWarsaw, Poland, VaBiden vakati nyika dzepasi rino dzine hutongo hwejekerere dzabatana nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia izvo vati zvange zvichinetsa kuita kwemakore akawanda.
Vakatiwo nyika dzinofanira kuramba dzakabatana kwenguya yakareba inotevera.
Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwavo nenyika dziri mugungano reNATO.
Meya weHarare Vakamiswa Basa VaJacob Mafume Votsika Madziro Pakudzingwa Mukanzuru
Gurukota rezvematunhu VaJuly Moyo vazivisa kuti VaJacob Mafume havasisiri meya weguta reHarare zvichitevera tsamba yavanoti yakanyorwa nebato rePeople’s Democratic Party richiti VaMafume havasisiri nhengo yebato iri.
Mutsamba yavanyorera munyori wekanzuru yeHarare iyo iri mumaoko eStudio 7, VaMoyo vati vakatambira tsamba kubva kubato rePDP richivazivisa kuti VaMafume vakange vave nhengo yebato reCCC saka nokudaro wadhi 17 yanga ichimirirwa naVaMafume haisisina mumiriri.
Nokudaro, VaMoyo vaudza kanzuru yeHarare kuti izivise komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti iwone kuti paitwa sarudzo itsva dzekutsvaga kanzura mutsva muwadhi 17.
Izvi zvinoreva kuti VaMafume vange vambomiswa basa havasisiri meya weguta reHarare.
Asi VaMafume vati tsamba yaVaMoyo haina maturo vakati ndivo vachiri meya weHarare vachiti VaMoyo havakwanise kuchinja zvakaturwa nematare nguva yapfuura kuti munhu chete anokwanisa kunyora tsamba akamirira bato rePDP ndiVaSettlement Chikwinya. Izvi zvinotevera tsamba yakanga yanyorwa naVaBenjamin Rukanda vachidzinga VaTendai Biti nedzimwe nhengo dzePDP mudare reparamende.
VaMafume vati VaMoyo vari kuedza kuvhariridza huori hwavanoti vari kuita mukanzuru yeHarare kubudikidza nekuvadzinga basa kunyange hazvo vachiti VaChikwinya havana kumbobvira vanyora tsamba yekuvadzinga.
Hatina kukwanisa kunzwa divi raVaMoyo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kubva mangwanani patawana tsamba yavo iyi. Asi VaMoyo vari kuongororwa neZACC vachipomerwa mhosva yekuita zvehuori pakutengwa kwepombi dzemvura muHarare.
Mutauriri webato reCCC, Muzvare Fadzayi Mahere, vati zvaitwa naVaMoyo zvinoratidza kuti bato reZanu PF riri kushaya hope nekukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzema by-elections.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaItai Zimunya, vati kuti takarasima nekuramba vongomisa VaMafume basa padiki-padiki kunosiya mibvunzo yakawanda pane mhinduro.
Kudzingwa mukanzuru kwaitwa VaMafume kunouyawo apo VaMoyo vakazivisa neChishanu chapfuura kudzingwa kwemamwe makanzura gumi nematanhatu mumakanzuru akasiyana-siyana munyika zvichitevera tsamba yakanyorwa neMDCT yaVaDouglas Mwonzora vachiti makanzura aya akanga asisatevedzeri zvido zvebato ravo.
VaMwonzora vakaudza vatori venhau neMuvhuro kuti tsamba dzekudzinga makanzura aya dzakanga dzanyorwa muna Gunyana wegore rapera sarudzo dzema by-elections dzisati dzaitw vachiti hofisi yaVaMoyo ndiyo yakazononoka kutumira tsamba idzi kumakanzura aya.
Mumwe wemakanzura akadzingwa naVaMwonzora, VaTonderai Samhu, vekuMashonaland Central Provincial Council, vati havasi kushushikana nekudzingwa kwavakaitwa vachiti pavakasarudzwa havana kumbobvira vasarudzwa vasarudzwa vari pasi pebato raVaMwonzora.
Mibvunzo yatatumira mutauriri weZEC, VaJasper Mangwana, yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo kuti tinzwe kuti vaziviswa here nezvenyaya yaVaMafume pamwe nemakanzura akadzingwa neMDCT aya uye kuti sarudzo dzekutsiva vanhu ava dzichaitwa rinhi.
Asi sachigaro weZEC, Amai Priscilla Chigumba vakaudza Studio 7 nguva pfupi yadarika kuti ma by-elections anoitwa mukati memazuva makumi mapfumbamwe kubva musi unenge waziviswa kuti nzvimbo hadzisisina vamiriri kunze kwekunge kwasara mwedzi mipfumbamwe kuti sarudzo dzenyika yose dziitwe.
Doctor Khupe Vokurudzira veMDC-T Kuti Vavhotere VaChamisa
Doctor Thokozani Khupe vachitaura nevatori venhau muBulawayo
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDC T Doctor Thokozani Khupe vazivisa kuti bato ravo rave kutsigira VaNelson Chamisa nebato ravo reCitizens Coalition for Change senzira yekukura nzira yekuti bato iri rigokunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa munyika gore rinouya.
Vachitaura nevatori venhau nhasi Muzvare Khupe vati vaona zvakakodzera kutsigira VaChamisa nebato ravo nekuti ndivo vanogona kuunza shanduko iri kudiwa munyika.
Amai Nomvulo Mguni vanove munyori mukuru wechikwata chaMuzvare Khupe vaudzawo Studio 7 kuti ruzhinji rwatambura munyika vakatsinhira kuti zvakakosha kuti vanhu vabatane vatsigire VaChamisa vachiti ndivo vanogona kugadzirisa zvinhu munyika kana vakatungamira hurumende.
Pamubvunzo wekuti Muzvare Khupe vakataurirana naVaChamisa here kana kuti kwete pamusoro pedanho ravo Amai Mguni vati vaviri ava vakataurirana asi hapana zvakawanda zvavanokwanisa kutaura pamusoro panhaurirano idzi.
Pave nekanguva pane runyerekupe rwekuti Muzvare Khupe vanoda kubatana naVaChamisa uye izvi zvakakonzera mutauro mukuru vamwe vachiti Muzvare Khupe isukukuviri uye havafanirwi kutambirwa naVaChamisa kana kuve nechigaro mubato reCCC. Asi vamwe vanoti vanofanira kutambirwa nekuti vanopikisa vakasabatana vanopatsanura mavhoti.
VaSwithern Chiroodza avo vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC mudunhu reBulawayo vati vanotambira danho raMuzvare Khupe rekutsigira VaChamisa nebato ravo. Asi vati vakawanda vachine kunyunyuta kukuru pamusoro pemaitiro aMuzvare Khupe.
Mumisangano yavari kuita yekutsvaga rutsigiro rwema by election, VaChamisa pachavo vari kugara vachitaura kuti bato ravo richiri idzva uye harisati rave nevatungamiri kunze kwevanhu vakafanobata zvigaro zvakasiyana siyana, vachiti vakuru vakuru vose vebato kusanganisira mutungamiri vachasarudzwa nevanhu.
Mune imwewo nyaya vamwe vatsigiri vebato reZAPU vanonzi vasungwa zvichitevera kusvitsa gwaro renyunyuto kukanzuru yeBulawayo pamusoro pemutero wekupaka motokari mumigwagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuZAPU kana kumapurisa panyaya iyi.
Asi mutauriri webato iri VaMthulisi Hanana ndivo vange vasvitsa gwaro renyunyuto iri kumutevedzeri wameya weguta VaMlandu Ncube pamwe nemunyori wekanzuru VaChristopher Dube.
VaHanana vati mitero yakatarwa nekambani yeTendy 3 haikwaniswe neveruzhinji uye vagari havazi kunzwisisa zvakawanda kusanganisira kuti kambani iyi yakawana basa iri sei.
Vapa kanzuru mazuva manomwe kuti ipindure. VaNcube vati sezvo chinangwa chayo chiri chekushanda zvakanaka nevagari ichapindura gwaro iri.
Mukupeta nyaya dzemuBulawayo kanzuru yeguta reBulawayo yasainirana chibvumurano chichaita kuti ibatsirwe kuvandudza mabasa ekuwanisa vanhu mvura neboka reVEI rekunyika yeNetherlands.
Chibvumirano ichi ndechemari inopfuura madhora ekuAmerica mamiriyoni mashanu nezviuru mazana masere, 5.8 million dollars, chichavepo kwemakore mashanu anotevera uye veVEI vachabatsirawo maguta eHarare neMutare muchirongwa chimwe chete.